၂၅ ရက်အတွင်းမှာ Samsung က Galaxy S5 ကို ၅ သန်းရောင်းချခဲ့သည် Androidsis
itsပြီလ ၂၁ ရက်တွင်စတင်ဖွင့်လှစ်ချိန် မှစ၍ တောင်ကိုရီးယားကုမ္ပဏီဖြစ်သည် Samsung သည်၎င်း၏ Galaxy S200.000 နှင့် Galaxy S8 Plus တို့၏နေ့ရက်တိုင်းကိုယူနစ် ၂၀၀,၀၀၀ ကျော်ရောင်းချခဲ့သည်.
အရ တင်ခဲ့သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူSamsung ၏ ၀ န်ထမ်းတ ဦး ကဤအချက်အလက်ကိုအတည်ပြုပြောကြားခဲ့သည်မှာ“ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုမဖော်ပြနိုင်သော်လည်းရောင်းချမှုသည်ကမ္ဘာအနှံ့တွင်ချောချောမွေ့မွေ့ရောက်ရှိနေသည်။ ယူနစ်5သန်းထက်ကျော်လွန်«ဤအရင်းအမြစ်ကိုအတည်ပြုလိုက်ပြီ
Galaxy S8: အရောင်း ၅ သန်း၊ တင်ပို့မှု ၁၀ ​​သန်း
အမှန်စင်စစ်ယခုကျွန်ုပ်တို့သည်အနည်းဆုံးယခုအချိန်တွင်ဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုနိုင်သည် တောင်ကိုရီးယားကုမ္ပဏီသည် Galaxy Note7ကဲ့သို့သောဘေးအန္တရာယ်များနှင့်ကင်းလွတ်သည် (ဒုတိယအကြိမ်အဂတိလိုက်စားမှုအပြီးတွင်ဤစက်ပစ္စည်းများကိုဈေးကွက်ထဲမှနှစ်ဆဆုတ်ခွာသွားစေခြင်း) သို့မဟုတ်သူ၏ဇာတိနိုင်ငံတွင်သူ၏အမှုဆောင်လှေကားထိပ်တွင်အကျင့်ပျက်ခြစားမှုများကြောင့်ဖြစ်သည်။
၂၀၁၇ ၏ပထမသုံးလပတ်အတွင်းတောင်ကိုရီးယားကုမ္ပဏီ Samsung သည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကကဲ့သို့သောလုပ်ကွက်များနှင့် ပတ်သက်၍ မည်သူ့ကိုမျှစဉ်းစားရန်မစွမ်းဆောင်နိုင်သည့်အံ့မခန်းသော ၀ င်ငွေကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ ထိုအကြီးစွာသောတရုတ်စျေးကွက်အတွက်ပေမယ့် Samsung ကစမတ်ဖုန်းရောင်းအားရဲ့ ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းကိုထားခဲ့တယ် ယခုနှစ်ပထမသုံးလအတွင်းအဓိကအချက်အလက်များရှာဖွေခြင်းမရှိခြင်းကြောင့်အကြောင်းအရင်းများအားလုံးကညွှန်ပြနေသဖြင့်နံပါတ်များသည်ယခုအချိန်တွင်ပြောင်းလဲနေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ထို့အပြင်ကုမ္ပဏီသည် Galaxy S8 စမတ်ဖုန်းမော်ဒယ်သစ်များ၏စီးရေ ၅ သန်းကိုသုံးစွဲသူများအားအပြီးသတ်ရောင်းချခဲ့သည် (activated devices အရေအတွက်ဖြင့်တိုင်းတာသည်။ ) တင်ပို့ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောအရေအတွက်က ပို၍ ပင်အံ့သြဖွယ်ရာဖြစ်သည်။ လက်လီအရောင်းဆိုင်များနှင့်တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်ရေးအော်ပရေတာများသို့ပေးပို့သည့်ကိရိယာအရေအတွက်သည်အမှန်တကယ်တွင်ဂဏန်းပေါင်း ၁၀ သန်းရှိသည့်ဂဏန်းနှစ်လုံးရှိအရေအတွက်ဖြစ်သည်။ ဒါက Samsung ၏ကိုယ်စားလှယ်တစ် ဦး သည်မီဒီယာနှင့်ဆက်သွယ်ပြောဆိုသည် Chosun Ilboခဏတာ ရောင်းချသည့်ထုတ်ကုန်အရေအတွက်သည် Galaxy S20 နှင့် S30 Edge ထက် ၂၀ မှ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းအကြားပိုမိုမြင့်မားသည်။ ဤနည်းအားဖြင့်ဤကိုရီးယားကြားခံထုတ်ဝေသည့်သတင်းအချက်အလက်အရအမြဲတမ်းဤတင်ပို့မှုကိုစာရင်းတင်သွင်းသည်နှင့်တပြိုင်နက်၊ Galaxy S8 သည် Galaxy စီးရီး၏ပုံစံဖြစ်လိမ့်မည် အခုချိန်အထိ။
သို့သော် Samsung Galaxy S8 နှင့် S8 Plus တို့ကိုစဉ်းစားပါက Samsung ၏အောင်မြင်မှုမှာ ပို၍ ပင်ထူးခြားသည် ၎င်းတို့ကိုနိုင်ငံအကန့်အသတ်ဖြင့်သာရရှိနိုင်သည်s သည်ကုမ္ပဏီအတွက်အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်သော်လည်း။ ဤသဘောမျိုးဖြင့်တောင်ကိုရီးယား၊ ယူနိုက်တက်စတိတ်၊ ပွာတီရီကိုနှင့်ကနေဒါတို့တွင်လွန်ခဲ့သော21ပြီလ ၂၁ ရက်မှစတင်ကာရှာဖွေမှုအသစ်များကိုရရှိခဲ့သည်။ လာမည့်ရက်သတ္တပတ်များအတွင်းတိုက်ကြီးဟောင်းအချို့ရှိရာနိုင်ငံများသာမကအိန္ဒိယနှင့်အခြားစျေးကွက်များသို့ပါ ၀ င်နိုင်ခဲ့သည်။ တကယ်တော့, Galaxy S8 နှင့် S8 Plus တို့ကိုကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးစျေးကွက်ဖြစ်သောတရုတ်တွင်မရရှိသေးပါဘယ်မှာ Samsung ကရှုံးနိမ့် ဒေသခံပြိုင်ဘက်နှိုင်းယှဉ်။
ဒါပေမယ့် Samsung ကအတည်ပြုပြီးတဲ့အတိုင်းဒီတိုးချဲ့မှုဟာမရပ်တန့်ပါဘူး Galaxy S8 နှင့် S8 Plus ကိုယခုလနှောင်းပိုင်းတွင်နိုင်ငံပေါင်း ၁၂၀ ၌ရောင်းချမည်ဖြစ်သည်.
ဤကိန်းဂဏန်းများ၏အရေးပါမှုကိုသိရှိရန်ကုမ္ပဏီသည် Galaxy Note 2,5 ၏ယူနစ်ပေါင်း ၂.၅ သန်းခန့်ကိုပထမဆုံးအပါတ် ၂ ပတ်အတွင်းရောင်းချနိုင်ခဲ့သည်၊ ငါတို့အားလုံးသတိထားမိသည့်အဖြစ်အပျက်များမတိုင်မီ။ ဒီဟာတွေကတရားဝင်ကိန်းဂဏန်းမဟုတ်ပေမယ့် Counterpoint ကနေပြီးတော့ Galaxy S7 နဲ့ S7 Edge ရောင်းအားဟာစတင်ရောင်းချပြီးသုံးပတ်အတွင်းမှာယူရို ၁၀ သန်းအထိရောင်းနိုင်တယ်လို့တွက်ချက်ပါတယ်။ ထို့အပြင်၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ်7ပြီလတွင်ရောင်းအားသည် ၅၅ သန်းအထိရောက်ရှိခဲ့သည်။ အဓိကအားဖြင့် Samsung သည် Note 10 ကျန်ရှိနေသေးသောပျက်ကွက်မှုကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်ရန်အတွက်ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့်လေ့လာသုံးသပ်သူများကအတော်လေးအကောင်းမြင်ပြီး Galaxy S8 နှင့် S8 Plus တို့သည် Samsung ကိုနှစ်စဉ်အမြတ်အစွန်းများရရှိရန်ကူညီလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ကြသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, ပုံရသည် အသုံးပြုသူများသည် Galaxy S8 Plus ကိုပိုမိုနှစ်သက်ကြသည် ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့အခိုင်အမာ, ကိန်းဂဏန်းများနှင့်ဒေတာတရားဝင်မဟုတ်ပါဘူး။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » ၂၅ ရက်အတွင်း Samsung သည် Galaxy S5s သန်း ၅ သန်းရောင်းချခဲ့သည်
Samsung Galaxy J5 (2017) - နည်းပညာဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်တရားဝင်ပြန်ဆိုချက်များ